Mmiri ozuzo na Greenland: ihe omume kpatara mgbanwe ihu igwe | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 24/08/2021 13:08 | Mgbanwe ihu igwe
Dịka anyị depụtarala n'ọtụtụ oge, mgbanwe ihu igwe na -ebute mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ nke na -emetụta karịa na mpaghara okporo osisi. Kwa afọ, nkezi okpomọkụ na -adị elu ma na -ebute mbibi dị ukwuu na gburugburu ebe obibi ndị ahụ kachasị emerụ ahụ. Na Greenland ọ bụ nke mbụ edere ụdị ihe a. Ma ọ bụ na August 14 gara aga ọ malitere izo mmiri na ebe kachasi elu nke ice. Nke a bụ n'ihi na ikuku ikuku nwere ike nọrọ n'elu oyi ruo awa itoolu.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị ihe kpatara ihe omume a ji mee na ihe nwere ike ibute ya.
1 Mmiri na -ezo na Greenland
2 Dice maka mmemme ahụ
3 Mgbanwe ndị a na -apụghị ịgbanwe agbanwe
Mmiri na -ezo na Greenland
Ịbawanye na nkezi okpomọkụ nke mbara ụwa niile na -ebute mbibi dị njọ n'ebe ndị ahụ na -enwekarị mmetụta maka mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ. Dị ka ọmụmaatụ, mpaghara nke okporo osisi na -adịkarị mfe mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ. Dị ka anyị hụworo n'ọtụtụ oge, Oké Osimiri Arctic na -agwụcha ice. Nke a na -emetụta anụ ọhịa nke chọrọ akpụrụ mmiri ka ọ dịrị ndụ ebe ọ bụ na gburugburu ya. Ọzọkwa, anyị maara na enwere nguzozi na webụ nri nke anụmanụ ga -eji wee dịrị ndụ.
N'ihi oke okpomọkụ na -arị elu, ogo a na -akụda. Ọ bụ nke mbụ a na -edekọ ụdị ihe a kemgbe e dekọrọ okpomọkụ. Ma ọ bụ ya N'August 14, ọ malitere izo mmiri ozuzo n'ebe kachasị elu nke ice ice. Ihe kpatara nke a bụ na ikuku ikuku na -enwe ike ịnọ n'elu oyi ruo awa itoolu. Nke a mere ya ugboro atọ n'ime ihe na -erughi afọ iri nke ihe a mere.
Na okpomọkụ dị n'okpuru efu na ihe karịrị mita 3.200 nke ịdị elu, ọnọdụ dị na elu ugwu Greenland Ha anaghị ebute mmiri ozuzo n'ụdị mmiri kama snow. Ya mere, eziokwu a dị oke mkpa.
Dice maka mmemme ahụ
Dabere na data sitere na US National Ice and Snow Data Center (NSIDC), oke agbaze nke mpempe akwụkwọ kpụrụ ọkụ ahụ ruru na August 14 na square kilomita 872.000. N'echi ya ka emesịrị ihe omume a, ice ice furu efu mpaghara 7 ugboro karịa nkezi nke na-eme n'etiti ọnwa Ọgọstụ. Naanị afọ 2012 na 2021 edebanyela aha ihe omume ịgbaze ihe karịrị square kilomita 800.000.
Obodo ndị ọkà mmụta sayensị na -amụ ọtụtụ ihe iji hụ ihe ga -esi na ya pụta. Dị ka ndị ọkà mmụta sayensị si kwuo, nke a abụghị ezigbo ihe ịrịba ama maka mpempe ice. Mmiri dị na ice na -eme ka oyi akwa gbazee. Ọ bụghị naanị maka ịdị ọkụ karịa na mgbe okpomọkụ, mana mmiri na -amịkọrọ ìhè anyanwụ ka ọ gbaa ọchịchịrị. Iji ghọta nke a, anyị ga -amata echiche nke albedo. Albedo bụ ọnụọgụ radieshon nke sitere n'anyanwụ n'elu ala. Ka ọ na -agbacha agbacha agba elu ya, ka ọ na -egosipụtakwu. N'okwu a, ice na -achacha ọcha nke mere na o nwere ndepụta albedo kachasị elu. Ebe ọ nwere mmiri n'elu ma gbaa ọchịchịrị karịa ice, ọ na -amịkọrọ ìhè anyanwụ, nke, n'aka nke ya, na -abawanyekwa agbaze.
Mkpokọta mmiri ozuzo dị na mpempe akwụkwọ ice bụ ijeri tọn 7. Ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na -arụkwa ọrụ na mpaghara ahụ site na ịkekọrịta onyonyo gbasara ọnọdụ agbaze na mpempe akwụkwọ mmiri Greenland na ọ bụ ihe na -echegbu onwe ya.
Mgbanwe ndị a na -apụghị ịgbanwe agbanwe
Nkwupụta IPCC ọhụrụ (United Nations Panel of Experts on Climate Change) nke ewepụtara na Ọgọst 9 adọla aka na ntị maka mgbanwe na ihu igwe na usoro ihu igwe, nke amalitelarị na ọ gaghị agbanwe agbanwe ruo ọtụtụ narị ma ọ bụ puku afọ. Otu n'ime ha bụ mmiri mmiri Greenland. Dịka ụlọ ọrụ ahụ siri kpebie, mfu ice na -aga n'ihu na narị afọ nke XNUMX fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke doro anya na, dịka nchọpụta ndị ọzọ siri gosi, dị ngwa ngwa karịa ka a tụrụ anya ya.
Dị ka sayensị ihu igwe siri kwuo, ihe na -akpalite ya bụ ihe ọkụkụ na -ebute site na ọrụ mmadụ, na mbelata zuru oke na nnukwu anwụrụ ọkụ bụ ihe bụ isi achọrọ, ka ihu igwe wee kwụsie ike na enweghị ọnọdụ ndị ọzọ ka njọ.
Na Greenland, 60% nke ịrị elu oke osimiri bụ n'ihi agbaze ice. Ọ bụrụ na usoro nzere ice na -aga n'ihu na ọnụego ugbu a, Ka ọ na -erule afọ 2100, nde mmadụ 400 ga -anọ n'ihe ize ndụ nke idei mmiri n'akụkụ osimiri kwa afọ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, mgbanwe ihu igwe na -emebiru ụwa niile nnukwu nsogbu. Nke a bụ mmalite dịka ọ ga -esiri gị ike ịtụgharị mgbanwe ndị ahụ. Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara mmiri ozuzo na Greenland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mmiri ozuzo na Greenland